Isilimela 13, 2018 admin
Binance uceba ukwakha ofisi kwi Channel Islands
Emva kutshanje ngokwakha ofisi e Malta, exchange sikhulu ehlabathini ngu volume sorhwebo, Binance, ligqibe ukuvula phezulu kwenye ofisi, eli xesha kule Channel Islands (Jersey island, phakathi UK ne France), uwunika nezimo xaxa ukuba ukusebenza phakathi UK kunye neemarike zaseYurophu
"Icebo Global ukwanda… Kwakhona yakha isiseko zokusebenza ukwanda yethu kulo lonke elaseYurophu strong "watsho Binance CEO Mark Changpeng.
Isizwe uneemeko ngasese kunye kwerhafu kuncomekayo kumashishini ukuba ufuna ukucwangcisa i akhawunti zabo zemali apho. Binance kuya kufuneka ukuba ahlawule 10% irhafu nge ngeniso.
Coinbase crypto index fund lusaziswa
Crypto giant Coinbase ubhengeze ukuba isalathisi cryptocurrency yayo fund, waqala wabonakala in March, luvuleleke ngoku kubatyali kwi US.
Le nkampani ithe kwisithuba blog ukuba ebone umdla 'kakhulu' bezimali, yaye ngoku ufuna ukuba abo bafuna ukutyala phakathi $250,000 yaye $20 million. Okwangoku, le nkampani ithe, inxaxheba limited U.S. kunye nabo izimali eziqinisekisiweyo.
Coinbase Index Fund unika abatyali-exposure kuzo zonke ii-asethi ezidweliswe kwi exchange, ziyalinganiselwa yi emakethe.
Coinbase akazange athi isebenza ukuba asungule ezinye iingxowa-mali "zifikeleleke kubo bonke abatyali, wagubungela uluhlu olubanzi lwempahla digital 'ukuze, ukuba awukho accredited U.S. zimali, khona ukuze kubekho amathuba wena kuxhomekeke into eza elandelayo.
Zug kuvavanya Blockchain ukugqiba imisebenzi kunye ID digital
Isixeko Zug, ekhaya le Swiss Cryptotal, imema abemi balo voti yokulinga blockchain. Kulindeleke ukuba babelane izimvo ngemiba eyahlukeneyo ebalulekileyo lendawo, kuquka izitakantlantsi ngexesha Lakeside Festival yonyaka kunye nokusetyenziswa wokupasa digital ukuboleka iincwadi kwaye ahlawule imirhumo yokupaka.
Ingxelo Daily Market Kraken for 12.06.2018
$197M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje